एस.एल.सी पढ्ने केटीलाई फकाएर जंगलमा लगे – Ekathmandunepal
Homeब्लगएस.एल.सी पढ्ने केटीलाई फकाएर जंगलमा लगे
२ पुष २०७४, आईतवार १८:५६ ekathmandu Nepal ब्लग 0
घरको फोन बज्यो।मैले फोन उठाए उता बाट कोसैले सोद्यो रोजिना छ? मैले भने “बहिर गको छ को बोलेको? उताबाट जवाफ आयो। म श्रेया बोलेको। स्वर मिठो थियो मैले भने तिमि रोजिनाको साथि हो उस्ले भनिहो। मैले भने तिम्रो स्वर त कति मिठो रैच उस्ले थ्यांक्यु भनि। मैले रोजिनालाइ केहि भन्नु छ भने उस्ले छैन भोलि सोम्बार पनि स्कुल बिदा छ रे भन्दिनुन भनि मैले त्यसपछि भने कुन स्कुल हो र अनि उस्ले लिटिल एन्जल्स भनि मैले तिमि र रोजिन एउटै क्लासमा हो भने उस्ले सिधा हिसाबले हो हामि दुबै
यसपालि एस एल सि दिने हो भनि। मैले ल बेस्ट् अफ लक भने उस्ले फेरि थ्यांक्यु भनि। मलाइ लग्यो अब मैले ढाट्नु हुन्न अनि मैले भने तिमिले खासमा रंग नंबर डायल गरेछौ तर तिम्रो स्वर एकदम मन पर्यो मलाइ त्यसैले मैले गफ गरेको नरिसाउ ल। उसले नरिसाइकन तपाइ त कस्तो गफाडि हुनु हुदो रैछ भनि।
मैले सरि भने। अनि थपिहाले अब चिनजान गरुम्नत। तिम्रो बारेमा त मैले थाहा पाइ हाले। मेरो नाम फलानो हो तर म तिमि भन्दा धेरै जेठो छु है। उस्ले हांसी हांसी भनि मलाई त म्योचुर मान्छे हरु मन पर्छ । मैले थपें तेसो भए त तिमीले मलाई मन पराउने भनेउ । अनि फेरी थपे म तिमी भन्दा म्याचोर हो बुढो हैन नि फेरी उस्ले हांसेर भनि कति बर्ष हो र तपाइ। मैले अघिनै म्याचोर मन पर्छ भनिसकेउ म म्याचोर मान्छे तिमिले मलाइ मन पराइ सकेउ अब एज किन चाहियो भने।
उस्ले ओह् माइ गड मैले एज सोध्ने बितिकै कस्तो डराको भनि मैले बल्ल बल्ल मन पराउने मान्छे पाको छु तेइ पनि भड्केला भनेर नि,मैले थपे।अनि मैले सन्दर्भ भेर्दै तिम्रो जांचको तयारि कस्तो छ नि भनेर सोधे उस्ले ठिकै छ भनि।एकछिन पढाइको कुरा गरेपछि उस्ले सेम कुरा कति रिपिट गरेर पढ्ने सबै पढेर सकिसक्यो अनि आजकाल पढ्नै मन लाग्दैन भनि.मैले उस्लाइ सम्झाए जस्तो गरे, म उस्को अगाडि म्याचोर देखुनु थियो। उस्ले खास मा पढ्दा पढ्दा दिक्क लागेर रोजिनालाइ फोन गरेको तर म संग भेट भयो भनि।
सोधें रोजिना संग गफ गर्दा रार्मो टाइमा पास भयो कि म संग?मैले भने अगर तिमिलाइ कुनै दिन पढ्दा पढ्दै बोर लागेर टाइम पास गर्नु पर्यो भने मलाइ फोन गर्नु पर्यो भने मलाइ फोन गर म तिम्रो टाइम पास बन्न तयार छु। बेकार मा रोजिना लाइ किन डिस्टर्ब गर्छौ उ बिचरा पढिराको हुन्छ होल।उ हांसि।पहिलो दिननै हाम्रो लामो गफ भयो।मैले उस्को नम्बर मांगे उस्ले दिन मानिन। मैले धेरै कर गरिन।
उस्ले आफ्नो ड्याडि रूममा औन लागेको ले राख्छु भनि मैले अब कैले गर्छौ भने उस्ले थाहा छैन भनि मैले पैले भन हैन भने म रख्दिन भने उस्ले आइ प्रोमिस आइ विल कल उ अगेन ऐले राख्छु भनेर राखि। उ संगको गफले म ढुक्क थिएं उस्ले फेरि कुनै दिन फोन गर्छे भनेर तर राति फेरि फोन आयो उस्ले सानो स्वरमा भनि सरि अघि ड्याडि आएर फोन राख्नु पर्यो तपाइ रिसाउनु भाको त छैन। ।मैले म रिसाको छैन तिमि त मलाइ मन पराउने मान्छे किन रिसाउनु भने।
उस्ले अहिले पनि धेरै बेर गफ गर्न मिल्दैन घरमा सबै जना छन भनि।मैले जिस्केर के भो त प्यार किय तो डरना क्या भने।अनि तिमिलाइ २४ घण्टामा जहिले मिल्छ गर यो मेरो पर्सनल फोन हो अरु कोसैले उठाउन्न।कि मैले उठाउछु म घरमा नभए उठ्दैन भने। उस्ले हुन्छ भनि र फोन राखि। बिहान ६ बजे फेरि फोनको घण्टि बज्यो उस्कै थियो।खासमा उस्का बाउ आमा मर्निंग वाकमा बिहन सधै
निस्किने रहेछन्। एस एल सि को बिद्यार्थि भनेर उस्लाइ उठाएर जाने रहेछन। उस्को त्यो दैनिकि बन्यो मलाइ फोन गर्ने। एस एल सि मुख्मा भएर स्कुल जानु नपर्ने हुनाले उ झन फुर्सतिलि थि। मिल्ने बितिकै फोन आउथ्यो। रात् दिन बिहन जुनै बेला पनि।मेरो पनि राम्रै टाइम पास भैरहेको थियो
एकदिन बिहान फोन आएन पचि फोन गरि मैले बिहान किन नगरेको भनेर सोधे उस्ले पेट दुखेर भनि।मैले क् भएर सोधे उस्ले हैन तेतिकै भनि मैले तेतिकै पनि पेट दुख्छ हिजो के खाएको थियो भने उस्ले खाएर दुख्ने हैन के त्यो भनि मैले के ले त भने उस्ले केइ हैनि भनि ।मैले किच् किच् गरेपछि म मिन्स् भएर दुखेको हो के भनि मैले ए मिन्स् हुंदा पेट दुख्छ भनेर अन्जान बने उस्ले बेलि बिस्तार लगाइ।मैले खासमा के हुन्छ मिन्स हुंदा कसरि थाहा हुंछ भने।उस्ले थाह छैन र आफुलाइ भनि मैले छैन भने। मैले अन्जान बनेर सोदिरहे उस्ले बुक पढ्नु भनि। पचि भन्दिन म त
भनि।मैले जिद्दि गरे।उस्ले ब्लड निस्किन्छ भनि मैले कहां बाट भने।उस्ले मलै थाहा छैन भनि मैले फेरि जिद्दि गरें।
उस्ले उरिनबाट भनि। मैले बिस्तारै उस्बाट सबै कुरा सुने।अब बिस्तारै उ खुल्दै गै। अनि ड्याडि मम्मिको सेतो बेडमा आफु मिन्स हुंदा आफ्नो ब्लड लागेर कस्तो एम्ब्यारेस भएको समेत भनि। उस्ले केट हरुको बारेमा सोधि र भनि केट हरुलाइ आनन्द छ। मैले केट हरुलाइ कसरि आनन्द छ र मिन्स् पो हुन्न अरु त हुन्छ नि भने।उस्ले के हुन्छ भनि
मैले मैले उस्ले जस्तै भन्न नखोजेको जस्तो गरें र पछि यौन आनन्दको लागि हस्तमैथुन गर्ने कुर गरें।उस्लाइ सायद भित्र भित्र रमाइलो लाग्यो होल।उस्ले क् हो त्यो भनेको भनि मैले उस्लाइ बेलि बिस्तार लगाएं। उ एकछिन बोलिन र पछि कस्तो मान्छे तपाइ त भनि। बिस्तारै मैले उसंग यौनका कुर गर्न लांगे।उ पनि कहिले रिसाको जस्तो गर्थि तर भित्र भित्रै रमाइलो मान्थि।त्यो मैले बुझेको थिएं।अब हामि फोनमा यौनका गफ गरेर आनंद लिने गर्थेउ।
उ कैले काहि सोध्थि किन आज थाकेको जस्तो आवाज छ नि म तेतिकाइ भन्थे भर्खर आफुलाइ स्खलित गरेको भएर होल। उ एक्छिन रिसाएर नबोले जस्तो गर्थि पछि पछि हस्थि। कहिले काहि यौनका गफ गर्दा गर्दै आफुलाइ स्खलित गराएको जस्तो गर्थें।अलि स्वां स्वां को आवाज निकाल्थे। उ फेरि पनि सोध्थि के भयो म भन्थे भैसक्यो। उस्को एस एल सि सकियो।
अब नर्सिंग को तयारि कक्षा लिन उ काठमाण्डु मोडेल हस्पिटल आउने भ इ। त्यो बेला सम्म मैएल् उस्लाइ भेटेको थिइन। एक्दिन भेट्ने कुर भयो। उस्ले आफ्नो आंखा सानो छ भनि। म कुरेर बसे तर त्यो दिन भेट भएन।भोलिपल्त हाम्रो भेट भयो। भर्खर सोर्ह लागेकि। कलिलो अनुहार.तर टम्म परेको शरिर। उचाइ ५।४”। पहिलो नजरमै मैले मनमनै भने आहा कति राम्री।बाहुनको अनुहार प्रष्टै देखिन्थ्यो।आंखा साना थिए तर गाजल सुहाएको थियो। उज्यालो अनुहार थियो।मैले उस्लाइ जमलमा भेटेको थिए मैले एसो हेरे मेरो आंखा अगाडि मिराज रेस्टुरेण्ट आयो। मैले तेतै जाउं भने उ म संगै लागि। भित्र गएपछि उस्ले मिल्क सेक खाइ मैले कफि।
उस्को क्लस जाने बेला हुनै लागेको थियो। उस्ले मलाइ आफ्नो फोटो भएको सि डि दि ।किन दिएको मलाइ अहिले पनि थाहा छैन। उस्को पिकनिकको फोटोहरु रैछ।निस्किने बेला मा ठुलो पानि पर्यो। हामि एकछिन त्यहि बसेउ। पानि कम भएपछि हामि निस्किएउ। उस्को सानो छता उस्ले मलाइ दि। मैले छाता खोले हामि दुबै एउटै छातामा ओत लागेर उस्को क्लस हुने ठाउ सम्म आइपुगेउ।उ संग जमल देखि बाग बजार सम्म आइपुग्दा हामि एउटै चातामा भएउ। स्वाभाविक थियो हामि अंगालो मा त थिएनौ तर टासिएका थियौ।मेरो शरिर तातिसकेको थियो।उस्को पनि कान रातो भएको मैले देखे। मैले उस्लाइ हेरे उ लजाए जस्तो गरि। मैले के भयो भनेर सोधे उस्ले केहि हैन भनि।उ संग हिड्दै गर्दा मेरो हात अनायासै उस्को स्तनमा ठोकियो। उ अत्तिएजस्तो गरि तर्सिए जस्तो। मैले के भो
भने। उस्ले केहि हैन भनि।ने ठांउ सम्म आइपुगेयौ।मैले छुट्टिओन मन नै छैन भने उस्ले फेरि भेटुंला नि भनि र गै।
राति हाम्रो फेरि गफ भयो मैले उस्को रुप र सौन्दर्य को बयानमा धेरै समय खर्चें। उस्ले मलाइ तपाइ पनि तेस्तो एजेड त हैन रैछ नि भनि।म ढुक्क भएं। मैले उस्को रुप संगै शरिरको बिस्तार गरें।उस्को घांटिमा भएको कोठि देखि उस्ले लगाएको नंग पालिस समेत सुहाएको बताएं.कस्तो याद गरेको सबै कुर भनि। मैले नलजएर ऐले लुगा लाउद जति देखे त्यति भने अब भेट्दा शरिरभरि को सबै कुर याद गर्छु। उस्ले अंग्रजिमा सोधि व्ह्याट डु उ मिन? मैले भने उ नो द्याट।
हाम्रो तेइ हप्ता नै फेरि भेट्ने योजना बन्यो।त्यो दिन उ चाडो घर बाट हिदेकि थि अनि मेरो आग्रहमा क्लास नजाने भै। आज म संग उ सित बिताउन पुर दिन थियो। मैले उस्लाइ दरबार मार्गको एउटा रेस्तुरेण्टमा लगे हामि ले मम खायौ।तेस्पछि मैले उस्लाइ आज तिमि संग दिनभरि गफ गर्न मन छ यहां के बस्ने जाउ भने उस्ले कहा भनि मैले उडल्यान्ड भने उस्ले नाइ मलाइ डर लाग्छ भनि मैले उस्लाइ नडराउन र यो राम्रो होटल भएकोले न आत्तिन भने। उस्को स्विकृति पछि हामि त्यहा गयौ। मैले रुम लिए।
हामि कोठामा गयौ। मैले ढोका लगाए।उ डराएकि जस्ति थि मैले उस्लै हौस्याए र गालामा चुमे।मैले बिस्तारै अफ्नो हात उस्को कांधमा राखे। उ तल हेरिरहेकि थि। मैले उस्को चिउडोमा समातेर उठाए र ओठ चुम्न लागे।बिस्तारै मैले आफुलाइ सजिलो बनाउदै मेरो पुरै मुख उस्को मुखमा र मेरो दुबै हाथ उस्को पछाडि लगे।उस्लाइ मुसर्दै किस खदै गर्दै थिए। मैले आफ्नो जिब्रो उस्को मुख भित्र हाले।
उस्लाइ थाहा नै भएन मैले के गर्न खोज्दै छु।मैले उस्को अनभिग्यता बाट थाहा पाइहले उस्लाइ टंग किस कसरि गर्ने थाहा छैन। पछि कुरा गर्दा उस्ले भन्थि मैले मुभिमा हेरेको चं थिए तर ऐले सम्म नगरेको कुर कसरि थाहा हुनु
,मैले उस्लाइ उत्त्जित बनाउन भरसक कोसिस गरें।मैले आफ्नो जिब्रो उस्को मुख भित्र हाले। उस्लाइ थाहा नै भएन मैले के गर्न खोज्दै छु।मैले उस्लै फर्काए उस्को पिठुयौलाइ मेरो छातिमा टासे।उस्को शरिर म संग जोडिएको थियो,मैले उस्को दुबै हात समाते टाइटानिकमा जस्तो। अनि बिस्तारै उस्को टाउको फर्कएर फेरि किस गर्न लागे।मैले बिस्तारै उस्को टाउको लाइ एउटा हातको भरमा छोडे र मेरो दाहिने हातलाइ उस्को बुबुमा पुर्याए।